सोनम को हुन् मेरो मूल्यांकन गर्ने ? म उनीजस्तो बाबुको नामले बलिउडमा आएको होइन : कंगना | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepalसोनम को हुन् मेरो मूल्यांकन गर्ने ? म उनीजस्तो बाबुको नामले बलिउडमा आएको होइन : कंगना
Home मनोरञ्जन सोनम को हुन् मेरो मूल्यांकन गर्ने ? म उनीजस्तो बाबुको नामले बलिउडमा आएको होइन : कंगना
सोनम को हुन् मेरो मूल्यांकन गर्ने ? म उनीजस्तो बाबुको नामले बलिउडमा आएको होइन : कंगना
काठमाडौँ : बलिउडमा अहिले ‘मि टु’ ह्यासट्यागको आतंक छ । यो ह्यासट्याग प्रयोग गर्दै महिलाहरुले आफ्नो पुराना सहकर्मीहरुलाई यौनशोषणको विवादमा तानिरहेका छन् । तर, यही अभियानले दुई नायिकाहरुको सम्वन्ध बिग्रिएको छ ।
पछिल्लोपटक निर्देशक विकास बहलविरुद्ध यौन दुव्र्यवहारको आरोप लाग्यो । सन् २०१४ मा फिल्म ‘बम्बे भेल्भेट’ को प्रमोसन टुरका क्रममा विकासले आफूमाथि यौन दुव्र्यवहार गरेको एक क्रु मेम्बरले दावी गरेकी छन् ।
यसलगत्तै कंगनाले मुख खोलिन् । उनले ती ‘पिडित’ महिलाको समर्थन गर्दै विकासको दुर्व्यवहार आफूले पनि झेलेको उल्लेख गरिन् । कंगनाले विकाससँग फिल्म ‘क्वीन’ मा काम गरेकी थिइन् ।
कंगनाले भनेकी छन्, ‘उनी विवाहित भए पनि दिनदिनै नयाँ युवतीसँग सेक्स गरेको गफ दिन्थे । मसित अनावश्यकरुपमा टाँसिन्थे, मेरो कपालमा घुसि्रन्थे र भन्थे- तिम्रो कपालको सुगन्ध मलाई मन पर्छ ।’
कंगनाको यो भनाईलाई कतिले पत्याए कतिले पत्याएनन् । हालै नायिका सोनम कपुुरलाई कंगनाको उक्त अभिव्यक्तमाथि प्रतिक्रिया मागिँदा उनले जवाफ दिइन्, ‘कंगनाले भनेको सबै कुरा सही हुन्छन् भन्ने छैन ।’
सोनमको यस्तो प्रक्रियाबाट कंगना निकै क्रुद्ध बनेकी छन् । उनले टि्वटरमा सोनमविरुद्ध फायर खोलेकी छन् । उनले लेखेकी छन्, ‘सोनम को हुन् मेरो मूल्यांकन गर्ने ? म उनीजस्तो बाबुको नाम भजाएर बलिउडमा आएको होइन । आफ्नो बलबुतामा टिकिरहेकी छु । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको प्रतिनिधित्व गरेकी छु । सोनमसँग के छ ? न अभिनय राम्रो छ न शरीर नै मिलेको । खाली बुवाको नाम बेचेर खाइरहेकी छन् ।’
कंगनाको यति कडा टिप्पणीप्रति सोनमको प्रतिक्रिया कस्तो आउला प्रतिक्षा गरौं ।
निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको प्रबन्ध मिलाउन सरकारलाई कांग्रेसको सुझाव
छालाको सुन्दरताको लागि अनार प्रयोग गर्नुहोस